Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | အာရှ-ပစိဖိတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း (၁-၁၂-၂၀၁၈ရက်နေ့၊ Hyatt Regency ဟိုတယ်၊ ကတ္တမန္ဒူးမြို့)
အာရှ-ပစိဖိတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း
(၁-၁၂-၂၀၁၈ရက်နေ့၊ Hyatt Regency ဟိုတယ်၊ ကတ္တမန္ဒူးမြို့)
နီပေါဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ကေ၊ပီ၊ ရှာမာ အိုလီ၊
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖက်ဒရေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ သောမတ်စ် ဂျီ၊ ဝေါလ်၊
နိုင်ငံ့ အကြီးအကဲများ၊ ဧည့်သည်တော်ကြီးများ၊
အာရှ-ပစိဖိတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ယခုလို တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့တွက် မိမိအနေနဲ့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ မိမိဘဝရဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ နီပေါ နိုင်ငံကို ပြန်လည် လာရောက်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်လည်း များစွာ ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း ပြောကြား လိုပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ နီပေါပြည်သူတွေရဲ့ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုမှုနဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုတွေ အတွက်လည်း များစွာ ကြည်နူးမိပါတယ်။
နီပေါနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်တဲ့ မိမိရဲ့ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်နှင့် တစ်ဆက်တည်း အာရှ-ပစိဖိတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြား ခဲ့တဲ့အတွက် နီပေါဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ကေ၊ပီ၊ ရှာမာ အိုလီကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြား လိုပါတယ်။ ယခုထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ သာယာ ဝပြောရေးနဲ့ လူသားအချင်းချင်း ယိုင်းပင်းကူညီမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို မြှင့်တင်ပေးရန် တစ်စိုက်မတ်မတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ် နေကြတဲ့ ကမ္ဘာ့နေရာဒေသ အနှံ့အပြားမှ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများစွာနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိစေခဲ့တာဟာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဧည့်သည်တော်များနဲ့ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်းများရှင့်။
ဒီကနေ့ကမ္ဘာကြီးဟာ မသေချာမရေရာမှုတွေ၊ ကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့ အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့၊ အထူးသဖြင့် မိမိတို့ ဒေသအတွင်းမှာ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ သမားရိုးကျနှင့် သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေဟာ ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်စေလျက်ရှိကြပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ နေရာကနေ ပေါ်ထွက်လာတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှု၊ ရောဂါဘယများ၊ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ တရားမမျှတမှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ ဘက်လိုက်မှုနှင့် မတူကွဲပြားမှုအပေါ် လက်မခံမှုများ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ သတင်း ဖြစ်စဉ်တွေကို မိမိတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အမြဲမပြတ် ကြားသိနေကြရပါတယ်။ အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ အင်အားစုများဟာလည်း နေရာတိုင်းမှာရှိနေကြပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်များကို တိုက်စား ဖျက်ဆီးလျက် ရှိကြပါတယ်။ မိမိတို့ကမ္ဘာကြီးအတွက် သဟဇာတဖြစ်မှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတို့ကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သော သဘာဝ သယံဇာတပစ္စည်းများနဲ့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေကို အဆင်အခြင်မဲ့စွာ ဖြုန်းတီးပစ်မှုတွေကို ကမ္ဘာ့ နေရာ အနှံ့အပြားမှာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတွေ လျင်မြန်စွာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုနဲ့ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနဲ့ ပြည်သူများဟာ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ဆက်နွယ်မှုနဲ့ မှီခိုမှုတွေ ပိုမိုတိုးတက်မြင့်မား လာခဲ့ပါတယ်။ ယခုလို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်မှီခိုလာရမှုရဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့ မိမိတို့ အားလုံး နေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကို အာမခံနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုမယ့် မှန်ကန်သော ဖြေရှင်းမှုရရှိရေးနဲ့ သဟဇာတဖြစ်မှုကို ခြိမ်းခြောက် နေတဲ့ ပြဿနာရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေး တို့အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မလွဲမသွေ တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မည်သည့်နိုင်ငံမျှ တစ်နိုင်ငံတည်း ရပ်တည်ရှင်သန်၍ မရနိုင်ပါ။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ဖော်ထုတ်ရန်နဲ့ ကာကွယ်ရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အကျိုးတူသာယာ ဝပြောရေးတို့ ရရှိရန်အတွက် နိုင်ငံတိုင်းဟာ နှစ်နိုင်ငံချင်းဖြစ်စေ၊ ဒေသတွင်း အချင်းချင်းဖြစ်စေ ထိတွေ့ဆက်ဆံကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန် မှီခိုနေထိုင်ကြရတဲ့ ယနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှေးရှုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ကို တိုးမြှင့်ဖော်ထုတ်ခြင်း နည်းလမ်းဖြင့်သာ မတူကွဲပြားတဲ့ လူမှု အသိုက်အဝန်းများအကြားမှာ သဟဇာတဖြစ်မှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ဒင်္ဂါးတစ်ခုရဲ့ မျက်နှာ နှစ်ဖက်သဖွယ် အပြန်အလှန် ဒွန်တွဲလျက်ရှိပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက် တစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အထွေအထူး ရှင်းပြရန် လိုအပ်မယ်လို့ မထင်ပါ။ ထို့ပြင် ငြိမ်းချမ်းမှုတည်တံ့ခိုင်မြဲခြင်း ဆိုတာဟာ ပဋိပက္ခ သို့မဟုတ် စစ်ပွဲများ မရှိရုံ သက်သက်မျှသာ မဟုတ်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုသည်မှာ အင်အားသုံး ဖော်ဆောင်ရတဲ့ ယာယီ အခြေအနေတစ်ရပ် မဟုတ်ဘဲ လူသား တစ်ဦးချင်း၊ မိသားစုတစ်စုချင်းနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီတို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်နှလုံးမှ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အပြုသဘောအင်အားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီတွေရဲ့အဆိုအရ လူသားတွေဟာ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ ပွားများဖို့ တိုက်တွန်းသူ တွေထက် အမုန်းတရား ဖြန့်ဝေ သယ်ဆောင်သူတွေရဲ့ စကားအပေါ် ပိုမိုနားယောင် လွယ်တတ် ကြတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ပဋိပက္ခတွေရဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းဟာ နာကျင်စေလိုခြင်းနဲ့ ဖျက်ဆီးလိုခြင်းကို ဦးတည် ဆောင်ရွက်တဲ့ မကောင်းသော စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပြီး၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်မယ့် လမ်းစကို ပွင့်သွားစေမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီကမှ တစ်ဆင့် အမုန်းတရားနှင့် အကြောက်တရား အဆိုးသံသရာစက်ဝန်းကို အမြဲတမ်း အသစ်တစ်ဖန် ဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအလင်းရောင်ကို မှေးမှိန်စေပါတယ်။
ဒီအဆိုးသံသရာစက်ဝန်းကို ဖောက်ထွက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက် ပြန်လည် ထွန်းတောက်လာစေဖို့အတွက် မိမိတို့အနေနဲ့ လူ့သဘာဝရဲ့ ကောင်းမွန်သော စရိုက် လက္ခဏာများ ရှင်သန်လာစေရန် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်သွားကြဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ ထို့ပြင် အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့နားလည်မှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ဖို့သာမက ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ခိုင်မာစွာ ဆက်လက်တည်ရှိနေစေဖို့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စွမ်းရည်တွေ အပေါ် ယုံကြည်မှု ပိုမိုရှိဖို့ ကြိုးပမ်းသွားကြဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ မိမိတို့အားလုံးရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကာလအတွက်သာမကဘဲ အချိန်ကာလ တစ်လျှောက်လုံးအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအချို့အတွက် သာမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံအားလုံးအတွက် လိုအပ်ချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နီပေါနိုင်ငံတို့ကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးကင်းမဲ့မှုရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ကြီးမားစွာ ခံစားခဲ့ကြရတဲ့ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ “အပြန်အလှန် မှီခိုမှု၊ အကျိုးတူ သာယာ ဝပြောမှုနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို အလေးထားပြီး မျက်မှောက်ကာလမှာ မိမိတို့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြရေး” ဆိုတဲ့ ယခု ကျင်းပတဲ့ အာရှ-ပစိဖိတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ ခေါင်းစဉ်ပါအချက်များကို အလေးအနက် သိရှိနားလည် ကြပါတယ်။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ မဏ္ဍိုင်ကြီး ၃-ရပ် အတွက် အခြေခံ လိုအပ်ချက်ကတော့ မိတ်ဖက်ပြု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် အဆိုပါ မဏ္ဍိုင်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း မိတ်ဖက်များ အဖြစ် ပေါင်းစည်း ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဖက်ပြုဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ သဘောထားတူညီမှုရှိသူများအကြား ဆက်ဆံရေးပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်မှီခိုမှုဟာ သီးခြားလွတ်လပ်မှုကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ တန်းတူညီမျှ လွတ်လပ်မှုရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့ ရလဒ်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ နှစ်ဦးဆောင်ရွက်ခြင်းထက်ပိုသော အကျိုးရလဒ်ရရှိလာစေနိုင်တဲ့ အချက်ကို လက်ခံခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးတူသာယာဝပြောခြင်းဟာ မိတ်ဖက်များ အားလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် အတူတကွ ဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ ယင်းသို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှ ရရှိလာတဲ့ အသီးအပွင့်များအား မျှဝေခံစားရေးဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက်တွေ့အသုံးချဆောင်ရွက်ရာမှ ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးထားမှုစံနှုန်းတွေဟာ စစ်မှန်တဲ့မိတ်ဖက်ပြုမှု ပေါက်ဖွားစေမယ့် မျိုးစေ့သာမက ကောင်းမွန်စွာ မိတ်ဖက်ပြုဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားလာစေမယ့် အသီးအပွင့် များလည်း ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးထားမှုစံနှုန်းတွေကို နေရာပေးမှုမရှိတော့တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ သြဇာ ကတ္တိမ မရှိကြတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အကန့်အသတ်ရှိမှုတွေကို အလေးပေးစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေကသာ စံနှုန်းတွေကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းလာတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။
မည်သူမှ အငြင်းမပွားနိုင်တဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ ဆီလျော်မှုရှိတဲ့ တန်ဖိုးထားမှုစံနှုန်းတွေဟာ ရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဗြဟ္မစိုရ် တရားလေးပါး ဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ဖွားမြင် တော်မူရာ ဒေသဖြစ်တဲ့ နီပေါနိုင်ငံက ပြည်သူတွေ သိကြပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ဗြဟ္မဝိဟာရ တရားတွေဖြစ်တဲ့ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ တို့ဟာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ မိတ်ဖက်ပြုမှု တို့ကို ကာလဒေသမရွေး ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ စံနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ မိမိတို့ဆက်ခံခဲ့ရတဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကင်းမဲ့ပြီး ရှုပ်ထွေးခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေများမှ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖန်တီးဖော်ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် ကြီးမားလေးလံတဲ့တာဝန်ကို ထမ်းရွက်နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသို့သောအချိန်ကာလတွင် ယနေ့ ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ အရေးပါတဲ့ စိန်ခေါ်မှုများကို ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တန်းတူမိတ်ဖက်ပြု ဆောင်ရွက်ရေးအပေါ် မိမိတို့နဲ့ ယုံကြည်ချက်ချင်းတူညီတဲ့ မိတ်ဆွေစစ်များ ရရှိမည့် အခွင့်အလမ်း များအဖြစ် ရှုမြင်ထားပါတယ်။
ယခုကျင်းပတဲ့ ဖိုရမ်ကနေပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးအကြား ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုတွေ ရှိလာပြီး ယနေ့ခေတ်ကာလရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို အပြုသဘောနဲ့ ပေါင်းစည်းဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေ မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး မြတ်နိုးသူများက အဆွေတော်တို့အား အောင်မြင်စေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သအပ်ပါတယ်။
Statement by the State Counsellor “Addressing Critical Challenges of Our Time: Interdependence, Mutual Prosperity and Universal Values”
(Kathmandu, 1 December 2018)
The Right Honourable K. P. Sharma Oli, Prime Minister of Nepal,
Dr. Thomas G. Walsh, Chairman of the Universal Peace Federation (UPF),
It is an honour andapleasure for me to be at this Asia-Pacific Summit held in Nepal, where I have passed some of the happiest days of my life. I was struck by the warm welcome and hospitality of the Nepalese people.
I would like to express my appreciation to the Prime Minister of Nepal the Honourable K.P. Sharma Oli, for inviting me to take part in this Summit, in conjunction with my first official visit to Nepal. It providesavaluable opportunity for meeting peoples from across the world who are dedicated to the promotion of peace, prosperity and humanity in our world.
The world today is going through global uncertainty, trade tensions and power competitions, especially in our region. Traditional and non-traditional threats are posing profound challenges, sometimes from unexpected directions. The incessant reports of disasters, terrorism, hunger, disease, migration and displacement, poverty, injustice, discrimination, prejudice, and bigotry in our daily life are overwhelming. There are negative forces everywhere eroding the foundations of peace. In all parts of the globe we can see thoughtless dissipation of material and human resources that are necessary for the conservation of harmony and happiness in our world.
With the rapid rise of information technology and the globalisation process, the peoples and the nations of the world have become increasingly inter-connected and interdependent. This global interdependence has compelled, and resulted in, increased cooperation to identify the causes of the problems that that threaten harmony and to find the right solutions that will help to ensure peace and stability on this planet, which is home to all of us. No nation can survive in solitary splendor. We have to engage with each other, either bilaterally or regionally, to project and protect our national interests and to seek peace and mutual prosperity. Only by promotingaculture of peace in this world of interdependence will it be possible to create harmony between diverse communities and societies.
I need hardly emphasise that peace is essential for sustainable development, that peace and development are two sides of the same coin. Sustainable peace is more than the mere absence of war or conflict. It isapositive force that springs from within the mind of each human being, each family and each society, not merelyatemporary condition imposed by force. Research on global attitudes today indicates that humans are more receptive to traffickers of hate than to advocates of loving-kindness or compassion. At the basis of conflict is ill-will, which seeks to hurt and to destroy and thus open the way to conflict which, in its turn, spews out an ever renewing cycle of hate and fear, snuffing out the light of peace.
To break away from this vicious cycle, to reignite the hope of peace, we need to constructaculture of peace that will nurture the positive traits in human nature, to work together not just to promote greater mutual respect and understanding, but also to foster greater confidence in our own ability to stay firmly on the path of peace.
Peace isacritical need not just for our time but for all time; not just for some countries but for all. Countries, such as Myanmar and Nepal, which have suffered severely from lack of peace, acquireakeen sensitivity to its links with the critical challenges this Summit is addressing today: interdependence, mutual prosperity and universal values. At the base of all three is partnership. It is as partners that we can hold together these rocks on which the edifice ofapeaceful, progressive world can be built.
Partnership impliesarelationship between equals. Interdependence is not the opposite of independence but the result of equally independent entities recognizing the need for cooperation, accepting that one plus one equals more than two. Mutual prosperity springs from the practical application of the concept of partnership, working together for the benefit of all partners, that all may enjoy the fruits of joint labours.
Universal values constitute both the seed from which true partnerships spring and the fruit that good partnerships bear. Nowadays, it often seems as though universal values no longer haveaplace in this world where norms are set by the powerful with little reference to the needs and constraints of those who do not possess the privileges of wealth and influence.
Yet there are values which few would deny to be of universal relevance. For example, the four Sublime States, the Brahma –vihāras, loving kindness, compassion, sympathetic joy and equanimity, can surely be accepted as values conducive of goodwill, cooperation, and positive partnership, anywhere, everywhere, any time.
As Myanmar grapples with the daunting task of creating peace and sustainable development out of an unhappy, tangled legacy, we look to critical challenges as opportunities for us to gain true friends who share our belief in equal partnership for peace.
I believe this Forum will offer opportunities for us to reach out to one another in our efforts to find positive, unifying ways of meeting the critical challenges of our times.
All lovers of peace wish you success.